ULebohang Mabuya Usikhumbuzile Ukuba Kubaluleke Kanjani Ukuzimela
22/03/2017 09:54 SAST | Updated 23/03/2017 09:28 SAST
Umntu into ezelwe nguMfazi imihla yakhe izele zinkathazo. LoMzali uye wamela abantwana bakhe, kwaye wamela nesininzi sethu, bantu abantsundu abangamabhinqa.
Ndisakhula uMakhulu wami (uMama kaTata) wayesoloko esithi ebomini nizodibana nembandezelo, wena ngoko, mntwana wam, yomelela. Umntu into ezelwe nguMfazi imihla yakhe izele zinkathazo. Ixabiso lomfazi aliqali ukuvela nje akuba ngumfazi, kwasebuntwaneni, umntu oyiNtombazana ukhula ebizwa ngokuba yintyatyambo yakowabo. Ngoko ke lento ithetha ukuba uMfazi ngumntu weXabiso, kwaye kumele aphathwe kanjalo.
Intliziyo iye yalihlwili ndisiva ukuba kwenzakele ntoni kuSisi uLebohang Mabuya kuleMpela veki siphuma kuyo. Emveni kokuba ndilivile ibali lokuba kuthe kwenzakala ntoni kwaSpur ehleli nabantwana bakhe, ndiye ndakhunjuzwa kwakhona leli lithi uMzantsi Afrika ayilozwe losapho okanye abahlobo.
Ndiyazingca ngaloMama, kwaye ndiyaziqhenya ngendlela athe wayi sombulula ngayo lengxabano iqalwe ngumlungu. Uye wamela abantwana bakhe, kwaye wamela nesininzi sethu, bantu abantsundu abangamabhinqa. Inkulu lento yenziwe nguloMzali, uye wasibonisa ukuba kubalulekile ukuzimela, nokuba kunzima kangakanani na, ungcangcazela, ungazi ukuba kungenzeka ntoni ngawe - kodwa uqiniseke phambi kobuso bencindezelo neendelelo yabeLungu.
Liphelile ixesha lamandulo apho thina bantu bantsundu senziwe izikorobo ngenxa yokuba kusithiwa asoze silingane nabamhlophe. Ndifunde lukhulu kuloMama, eyona mfundiso endiyithathileyo, yeyokuba asikho isidingo somelana nodlame lwabamhlophe kuze siphumelele. Usibuyisele amandla ethu uSisi Lebohang Mabuya.
Izolo ibingumhla wamalungelo, kodwa apho ndijonga khona andiwaboni mna lamalungelo kumane kuthethwa ngawo. Zinintsi izehlo ezimanyumnyezi kwihlabathi lanamhlanje ezifana nesihlelo sikaSisi Lebohang. Ngoko elam liyagxininisa ngelithi masibambaneni siyilwe nayiphi into ejongela phantsi amalungelo ethu.
uLwazi uye wayibeka ngokucacileyo indaba yomhla wamalungelo kumbongo wakhe obonakalisa ukuba thina silubala olunamalungelo anyhashiweyo:
Umhla Wamalungelo Oluntu (Human Rights Day)
Ewe yona siyayibona inguqu
Kodwa izinto ababesenza zona zinkulu
Babesibulala okwezilwanyana belawula ngegqudu
Kungafunwa zimvo nambono zethu sibonelwa induku
Xa siqhankqalaza sidlakazwe ngeembumbulu
Kwakunzima kotatomkhulu betsarhwa yirhuluwa
Singabalulekanga kubo nobuninzi bethu okwembuphu zesonka
Umlisela nomthinjana Izizivubeko zamabhulu isizwe sonke sikhala
Wafa umntomnyama, umdaka, ngenxa yondlebe zikhanyilanga
Sinamalungelo nangona uninzi lwethu lusentilongweni
Siyalingana nangoma thina sodwa siphila entluphekweni
Bacela uxolo kodwa imihlaba yotatomkhulu etyebileyo abakasibuyiseli
Ikwangabo abaxhamla kubutyebi balapha emzantsi
Inkokheli aziyiva lentlupheko zithi azisiboni isizathu sokuba singaxoli
Ndicela nize ngobuninzi benu nindibonise lamalungelo
Khanicikoze nindicacisele ngembono zenu kulo mlingwano
Ndisemncinci mna ndicela nindibhentsisele ngalombambiswano
Ndizoqala ngaphi ubhiyozela into engekhoyo nengabonakaliyo
Ndivula umkhusane ngentlonipho neqonga lokwabelana ngezimvo
Ndiphulaphule kuni nonke ngomdla omkhulu mzi ka Phalo
Ingaba lendlela siphila ngayo ihamba ngentando kaThixo nangokudaliweyo
Ingaba sithi ababhanxiweyo, abaqhathiweyo okanye abacimeleyo
Sisisizwe esilungileyo, uhlanga olubambeneyo, umzi onembeko...
- Lwazi Manengela
MORE:Human Rights DayLebohang MabuyaSouth AfricaVoices